Sir Alex Ferguson: Never Give In (2021) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 8.5/10 280 votes
Alex Ferguson, Eric Cantona, Gordon Strachan, Ryan Giggs
ဆာအဲလကျဖာဂူဆနျရဲ့ အသဈစကျစကျ Documentary ဖွဈတဲ့ Never Give In 2021 ကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ. မနျယူအသငျးစကိုငျစဉျကအကွောငျးတှအေပွငျ ဖလားတှအေလဈလဈရယူခဲ့တာတှေ ကနျတိုနာလို ဘောလုံးလူကွမျးကို ကိုငျတှယျပုံတှအေပွငျ ကွီးကယျြခမျးနားတဲ့မနျယူအသငျးရဲ့ သမိုငျးနဲ့ နိုငျပှဲအလဈလဈရယူခဲ့ပုံတှကေို အောငျ့မဖှေ့ယျတှရေ့မှာဖွဈပီး ဖာဂူဆနျရဲ့ ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ ဘ၀အတှအေ့ကွုံတှကေိုပါခံစားရမှာဖွဈပါတယျ. မနျယူဖနျတှအေနနေဲ့လကျမလှတျသငျ့တဲ့ ရုပျရှငျကားတဈခုပါ
ဆာအဲလက်ဖာဂူဆန်ရဲ့ အသစ်စက်စက် Documentary ဖြစ်တဲ့ Never Give In 2021 ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်. မန်ယူအသင်းစကိုင်စဉ်ကအကြောင်းတွေအပြင် ဖလားတွေအလစ်လစ်ရယူခဲ့တာတွေ ကန်တိုနာလို ဘောလုံးလူကြမ်းကို ကိုင်တွယ်ပုံတွေအပြင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မန်ယူအသင်းရဲ့ သမိုင်းနဲ့ နိုင်ပွဲအလစ်လစ်ရယူခဲ့ပုံတွေကို အောင့်မေ့ဖွယ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပီး ဖာဂူဆန်ရဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေကိုပါခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်. မန်ယူဖန်တွေအနေနဲ့လက်မလွတ်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုပါ
Alex Ferguson Eric Cantona Gordon Strachan Ryan Giggs
Option 1 onedrive.live.com 514 MB SD (480p)